MRF suggests 18 points for farmers | Myanmar Business Today
HomeBusinessMRF suggests 18 points for farmers
လာမည့်မိုးစပါးရာသီမှ စတင်ပြီး စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေကို တစ်ဧကလျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းနှုန်းဖြင့် တိုးမြှင့် ချေးငွေထုတ်ပေးရေးအပါအဝင် အချက်(၁၈) ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အကြံပြုထားသည်။
လယ် (၁၀) ဧကအထက်မှ (၁၀၀) ဧကအထိ ပိုင်ဆိုင်သည့်လယ်သမားများကိုလည်း မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ပေးရန် နှင့် မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများနှင့် မျိုးစေ့သန့်စင်ထုတ်ပိုးဖြန့်ဖြူးသည့် မျိုးထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ချေးငွေများထုတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အကြံပြုထားသည်။
ယင်းပြင် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် အတွက် ချေးငွေများကို အောင်ခြေအဆင့်တွင် လွယ်ကူစွာအချိန်မီရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် စပါးအပြင်အခြား စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန်၊ ချေးငွေအပြင် တောင်သူများလိုအပ်သည့် နည်းပညာ၊ သွင်းအားစု၊ စက်ကိရိယာနှင့် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုများအဆင်ပြေစေရန် အစိုးရမှ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အကြံပြုထားသည်။
အရန်ဆန်အစီအစဥ်ကို ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးနှင့် အဓိက မြို့ကြီးများတွင် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် စတင်ဖေါ်ဆောင်ထားရှိရန် နှင့် ဆန်စပါးနှင့် လယ်ယာသားငါးများ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နေသည့် စက်ရုံများကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ သက်သာသော အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေထုတ်ပေးရန်တို့လည်း အကြံပြုထားသည်။
ထို့ပြင် ဆန်ကုန်သည်များ ဆန်ဝယ်ယူရန် ချေးငွေကို တောင်သူများနှင့် အကျိုးတူကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်ဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လည်း ပါဝင်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆန်တန်ချိန် ၁၃ သန်းကျော်ထွက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှု တန်ချိန် ၁၀ သန်းဝန်းကျင် ၊ ပြည်ပတင်ပို့မှု တန်ချိန်နှစ်သန်းကျော်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပြည်တွင်းတွင် အရန်ဆန်လုံလောက်ရန် ဆန်တင်ပို့မှု၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတော်အရန်ဆန်အဖြစ်ထားရှိရန် ဆန်ကုန်သည်များကို ညွှန်ကြားထားသည်။ ယခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆန်တင်ပို့မှု တန်ချိန် နှစ်သန်းကျော်တင်ပို့ရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေဖြင့် လျာထားပြီး စက်တင်ဘာလအထိ လစဉ်ဆန်တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲကို ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်နှစ်မျိုးလုံးမှ တင်ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Myanmar Rice Federation has submitted 18 points suggestions to the government including to raise agricultural loans to K200,000 minimum per acre to support farmer amid Covid-19 outbreak.
The federation also urged Myanmar Agricultural Development Bank to provide agricultural loans to farmers who owns 10-100 acres of farmlands and loans to seed producing farmers and companies.
The suggestions also include to help farmers gain loans for agriculture and livestock breeding in time while allowing them to do other business such as livestock breeding and growing other crops apart from rice on the farmlands. The existing law does not allow farmers to do livestock breeding on farmlands.
It also urged the government to facilitate between suppliers and farmers to have access technology, agricultural inputs, farming equipment and market, implement rice reserve program in Yangon, Mandalay and other major cities, and help rice and livestock processing plant have loans from foreign countries.
Myanmar produces over 13 million tons of rice annually and consumes 70 percent of them while 20 percent are set to export and 10 percent reserve.
Previous articleရပ်နားထားသည့် စက်ရုံများမှ အလုပ်သမားများကို လူမှုဖူလုံရေးကြေး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းထုတ်ပေးမည်
Next articleအထည်ချုပ်လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ မေလ ၁ရက်နေ့တွင် စတင်ပေးအပ်